တရုတ်နိုင်ငံက ပိုမိုအားကောင်းသော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း တည်ထောင်မည့် အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ပေကျင်းမြို့ ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် ပေကျင်း နိုင်ငံတကာစာအုပ်ပွဲတော်တွင် ဧည့်သည်များနှင့် စကားပြောဆိုနေသော စာအုပ်ပြပွဲပြသသူအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား စာနယ်ဇင်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသည် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေး၊ အမြတ်အစွန်းများ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတို့ကို မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) အတွင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူများ၏ မြင့်တက်လာသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန်အတွက် အရည်အသွေးရှိသော စာပေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုပေးအပ်ရန် အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် “ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန” တစ်ခုအဖြစ်သို့ ထူထောင်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချရန် ရည်ရွယ်လျက် ၎င်းအစီအစဉ်သည် အခြားသော ရည်မှန်းချက်များအကြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှု တိုးချဲ့ရေး၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း အားကောင်းရေး၊ ခိုင်မာ၍ ခေတ်မီသောဈေးကွက်စနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး အလေးထားသည့် အဓိက မစ်ရှင်များအား ထည့်သွင်းချမှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) — China’s National Press and Publication Administration has releasedaplan on enhancing the publishing industry’s quality, profits, competitiveness and influence.
During the 14th Five-Year Plan period (2021-2025), the publishing industry should focus on providing more quality products and services to meet the people’s increasing needs, according to the plan.
Aiming to layasolid foundation for building China intoa“publishing powerhouse,” the plan notes key missions regarding expanding digital publishing, strengthening the printing industry, buildingasound and modern market system, and promoting high-quality overseas development, among other aims. Enditem